Mareykanka Oo Warbixin Ka Soo Saaray Duqeymo Uu Ka Fuliyay Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Mareykanka Oo Warbixin Ka Soo Saaray Duqeymo Uu Ka Fuliyay Soomaaliya
By HornAfrik	 On Nov 13, 2017
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 24-kii Saac ee ugu dambeeyay ay 3 meelood oo kala duwan ay duqeymo ka fuliyeen diyaaradhooda nuuca aan duuliyaha lahayn, islamarkaana ay ku dileen tiro ka tirsanaa dagaalyahannada Xarakada Al Shabaab.
Afhayeen u hadlayTaliska Mareykanka Africom ayaa sheegay in duqeynta koowaad ay ka geysteen deegaanka Buulo Gaduud ee Gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo fariisin u ah Al Shabaab, islaamarkaa ay ku dileen dagaalyanno ka tirsanaa Al Shabaab oo aysan tiradooda Cayimin.
Duqeynta labaad ayuu sheegay Mareykanku in ay ka fuliyeen Gobolka Shabeelaha Hoose meel 40 KM u jirta Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho, kuna dileen xubno ka tirsanaa Al Shabaab, oo ay bartilmaameedsadeen.
Duqeynta seddexaad ayaa warbixinta lagu xusay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareynkanku ay ka fuliyeen Buuraleyda Puntland oo ay ku sugan yihiin Kooxda Daacish.
Waxa ayna sheegeen in weerarkani uu yahay kii labaad ee uu Mareykanku ku qaado Daacishta ku sugan Soomaaliya, gaar haan deegaanada Puntland.
Ugu dambeyn Mareykanka ayaa wacad ku maray in uu sii wadi doono duqeymaha iyo weerarada uu ku qaadayo fariisimaha Xarakada Al Shabaab iyo Ururka Daacish ay ku leeyihiin Soomaaliya.
US Hits Alshabaab Base In Fresh Airstrikes